Mmiri osisi, dị mfe ma dị mfe ime ụmụaka | Crafts Na
Osisi Mmiri, dị mfe ma dị mfe ime ụmụaka
Jenny monge | | Crafts, Ọrụ katọn, Ọrụ nka, Crafts maka ụmụaka, Nzughari
Ndewo onye obula! Na ọrụ nke taa anyị ga-arụ ọrụ mmiri, osisi okooko osisi na akwukwo na kaadiboodu. Ọ dị mfe ịme na nnukwu echiche ịmalite oge ọhụrụ a na ụmụ anyị.
Chọrọ ịma ka ị ga-esi rụọ ọrụ a?
1 Ihe ndi anyi ga acho iji mee osisi mmiri anyi
Ihe ndi anyi ga acho iji mee osisi mmiri anyi
Green crepe akwụkwọ, ọ nwere ike nwee shapes dị ka ahụ m họọrọ ma ọ bụ.
Akwụkwọ Crepe na ụda pink iji imitateomie okooko osisi.
Mpempe akwụkwọ kaadiboodu.
Akwụkwọ mama nke na-adịghị oke mmiri mmiri n'ihi na a ga-enwe ọdịdị. I nwekwara ike iji teepu nwere akụkụ abụọ.
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ mee obere mkpirisi ntakịrị n’ime otu kaadiboodu n’akụkụ nke akwụkwọ mpịakọta ịdị ọcha. Mbelata ndị a ga-e mimomi mgbọrọgwụ osisi ahụ na, na mgbakwunye, ga-enyekwu nkwado mgbe ị na-akwado osisi ahụ. Ya mere, anyị ga-pịa mpịakọta kaadiboodu ahụ na tebụl ka ọ were ọdịdị ahụ nke ọma.
Anyị bepụ a rektangulu nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ crepe akwụkwọ na n'ogige atụrụ ya na ọkara. Anyị na-aga inye ya osisi udi na mkpa, na-eburu n'uche na anyị ekwesịghị ịkpụcha akụkụ ahụ dum ka akụkụ abụọ nke mpempe akwụkwọ ahụ wee dịrị n'otu.
Ugbu a anyị na-emeghe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma kpoo kaadiboodu nke akwụkwọ mposi na-aga n'etiti akụkụ abụọ ahụ nke crepe akwụkwọ na anyị ga-gluu dum onu ​​nke mere na ọ na-anọgide ọma ofu.
Na pink crepe akwụkwọ, ka bee obere iberibe ma anyi ghaa ha o buru bọọlụ na emesia anyi ga arapara n’elu osisi dika ifuru ifuru.
Na ndepụta0! Anyị nwere ike itinye osisi anyị nke jupụtara na ifuru n'elu shelf iji chọọ ụlọ anyị mma na mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts maka ụmụaka » Osisi Mmiri, dị mfe ma dị mfe ime ụmụaka
Dragọn ahụ na akwụkwọ mposi mpịakọta kaadiboodu